May 23, 2021 - Babal Khabar
May232021 by EditorNo Comments
सब जनतालाई खोप नलगाई चुनाव गर्दिन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको उपचार पाउने हकलाई सम्मान गर्न दिनरात सरकार लागी परेको बताएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव भन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने बताए । कार्यक्रमा उनले भने ‘हामी चुनाव भन्दा अगाडि नै सबै जनतलाई खोप लगाईसक्ने त्यस प्रयासमा जुटेका छौँ ।’ यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नबाट बन्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्याकमेलिङ हो’ उनले भने, ‘सार्वभौसमत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्लाबेग्लै हो जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै उनले भने, ‘सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ । यो अभियानका पछाडि दूषित उद्देश्यका ब्लाकमेलरहरु छन् । जनता यसबाट अलमलिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘विभिन्न मित्
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा यस्तो २५ रिट पेस,पूरा हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार २५ रिट आएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट पेस भएका छन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुन्छ,' उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रे
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता प्राप्त बारे यस्तो अध्यादेश जारी
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेले जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । केही दिनअघि नै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले आइतबार जारी गरेकी हुन् । यो पनि, कर्णजीत बुढाथोकी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले केपी ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गर्दै सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जेठ ७ र ८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना महामारीको कहालीलाग्दो अवस्थामा संसद् विघटन गरेका ओलीलाई निरंकुशको संज्ञा दिँदै उनलाई हटाएर जनउत्तरदायी राष्ट्रिय सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको आइतबार विज्ञप्तिमार्फत जनाइए
माधव नेपाल पक्षका यि ६ सांसदले यस्तो गर्नाले सर्वोच्च अदालत जाने विपक्षको निर्णय रोकियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा पाँच दलका शिर्ष नेताहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । संसदमा भेला भएका नेताहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेका हुन् । बहुमत सांसदहरूले विघटन खारेज गरेर संसद् ब्यूँताउनका लागि अन्तिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेका हुन्। आज दायर गर्ने भनिए पनि रिट तयारीका क्रममा रहेकाले भोली गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा विघटन गरेपछि विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धन आजनै सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णयमा पुगेका थिए । हस्ताक्षर जुटाउने कार्य अझै जुटिनसकेकाले आजका लागि सर्वोच्च नजाने तय भएको एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले गर्न बाँकी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भोलि १० बजे सर्वोच्च जाने तय भएको जानकारी दिए । नेताहरु
राष्ट्रपतिको अधिकारबारे कहीँ उजुर यश कारण लाग्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार ठहर गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे कहीँ उजुरी नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै त्यसविरुद्ध प्रश्‍न गर्न नपाइने बताएका हुन् । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो । यसविरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न मिल्दैन’ ओलीले भने । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ जना गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको दावी
अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय गर्‍यौं अब यसरी दर्ता गर्छौं : माधव नेपाल
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएपछि नेकपा (एमाले) भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ । माधव नेपाल समूहले संसद् विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमसँगै पार्टी पुन: लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी : एमाले फेरि फुटको दिशामा लागेको हो ? केपी शर्मा ओलीले धकेलेर त्यतै पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ । अर्को पार्टी खोल्न बाध्य पार्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूकै चाहिँ कुरा के हो त ? ओलीजीको प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँमा जाने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय नै छ । हाम्रो आज (शनिबार) पनि बैठक बसेको थियो, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं । तपाईंको समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले नि
कोरोनाका बीच अमेरिकामा अर्को साल्मोनेला भाइरसको संक्रमण देखियो,यसरी सर्ने भएकोले कुखुरासँग टाढा रहन आग्रह
९ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीच अमेरिकामा फेरि अर्को भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले मानिसहरूलाई साल्मोनेलाको बढ्दो प्रकोपका कारण कुखुराबाट टाढा रहन निर्देशन दिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४३ राज्यमा १६३ जना बिरामीमा यसको संक्रमण देखिएपछि सीडीसी र जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले साल्मोनेला प्रकोपको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्य एजेन्सीहरू भन्छन्, “मानिसहरूले कुखुरालाई चुम्नुबाट बच्नुपर्छ । साथै, सकेसम्म उनीहरूको वरिपरि घुम्नु समेत हुँदैन ।” त्यसो नगरी, यसको कीटाणुहरू तपाईंको मुखबाट शरीरमा पुग्न सक्छ र संक्रमण फैलाउन सक्छ र तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। ” यो चेतावनी पनि दिइएको छ कि कुखुराहरू स्वस्थ र सफा भए तापनि तिनीहरू यस कीटाणुका वाहक हुन सक्छन् । यसको कीटाणु सजिलैसँग जहाँ जहाँ कुखुरा छन् ती ठाउँहरूमा फैलिन सक्छन् । सा